လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခင်၊လုပ်နေစဉ်နဲ့ လုပ်အပြီးမှာ ရေဘယ်လောက်သောက်သင့်လဲ? - For her Myanmar
လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခင်၊လုပ်နေစဉ်နဲ့ လုပ်အပြီးမှာ ရေဘယ်လောက်သောက်သင့်လဲ?
အခုပဲရေဘူးပြေးကိုင်နေပြီမလား မညာချင်စမ်းပါနဲ့ ချိမရယ်
ရေအသက်တစ်မနက်တဲ့။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ရေဓာတ် ၇၀% နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာမို့ အသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့အတွက် အရမ်းအရေးကြီးတယ်လို့ပြောရင်လည်း မမှားပါဘူးနော်။ အထူးသဖြင့် ပုံမှန်သွားလာလှုပ်ရှားရုံတင်မကဘဲ လေ့ကျင့်ခန်းပါထပ်လုပ်တဲ့ အချစ်လေးတွေဆိုရင် တခြားလူတွေထက် ရေဓာတ်ဆိုတာပိုပြီးလိုအပ်တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့လည်း တချို့က ရေသောက်တာမကောင်းဘူးပြောကြပြန်တော့ ရေကသောက်ရမလိုလို လက်ထဲကဘူးကိုပြန်ပဲချထားရမလိုလိုနဲ့ ဇဝေဇဝါတွေထပ်ဖြစ်ရပြန်ရော။ မသောက်ပြန်ရင်လည်း လူကပင်ပန်းပြီးထပ်နုံးသွားမှာဆိုတော့ ကြံရာမရဖြစ်ပြီး ဘာလုပ်လို့လုပ်ရမှန်းမသိတဲ့ ယောင်းလေးတွေအတွက် ဒီဆောင်းပါးလေးကို ရေးဖြစ်သွားတာပါ။ ကဲ ဒီတော့ ဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင် ….
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရရင် လူတစ်ယောက်ကနေ့စဉ်သွားလာလှုပ်ရှားဖို့အတွက် ရေ ၈ ခွက်အနည်းဆုံးဝင်အောင် သောက်ပေးရပါမယ်တဲ့။ ဒါပေမဲ့ ဒီ Routine ထက်ပိုပြီး လေ့ကျင့်ခန်းပါထပ်လုပ်တဲ့ယောင်းလေးတွေကတော့ လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခင်၊ လုပ်နေစဉ်အတွင်းနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်အပြီး စသည်ဖြင့် ၃ ပိုင်းထပ်ခွဲပြီး ရေထပ်သောက်ပေးရပါမယ်။ BMI၊ ဝိတ်၊ အရပ်၊ လိင် စတာတွေအပေါ်မူတည်ပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သောက်ရမယ့်ပမာဏချင်းမတူပေမဲ့ နှင်းကတော့ စံသတ်မှတ်ထားတဲ့ အတိုင်းအတာကိုပဲ ပြောလိုက်တော့မယ်နော်။
Related Article >>> ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ အဆီရာခိုင်နှုန်းကို လိုက်ပြီး ပုံစံက ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားလဲ?
လေ့ကျင့်ခန်းမဆော့ခင် ၂ နာရီ၊ ၃ နာရီအလိုမှာတော့ ရေ ၁၇ အောင်စကနေ ၂၀ အောင်စအထိ သောက်ပေးရပါမယ်။ သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ ၈ အောင်စသောက်ပေးရမှာဖြစ်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတဲ့ အတောအတွင်းမှာတော့ ၁၀ မိနစ်ခြားတစ်ခါလောက် ၇ အောင်စကနေ ၁၀ အောင်စအထိ သောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းဆော့ပြီး မိနစ် ၃၀ ကနေ ၁ နာရီအတွင်းမှာတော့ နောက်ထပ် ၈ အောင်စကိုသောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နှင်းလီတာနဲ့တွက်ကြည့်တာတော့ ၁ လီတာကျော်နေတယ်။ ဆိုတော့ ခါတိုင်းရေ ၈ ခွက်အပြင် ရေတစ်လီတာတစ်ဗူး အပိုဆောင်းသောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ။
အဓိကသတိထားရမှာကတော့ ကိုယ်ကအရမ်းမောပြီး နှလုံးခုန်နှုန်းမတရားမြန်နေတဲ့အချိန်မှာ ရေမသောက်ဖို့ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီအချိန်မှာ ဦးနှောက်အပါအဝင် တခြားခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေက (ဥပမာ နှလုံး) လုပ်ဆောင်မှုအပြင်းထန်ဆုံးအချိန်ကို ရောက်နေတာမို့ ကိုယ်ကမောကြီးပန်းကြီးနဲ့ ရေတွေအများကြီးသောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ အသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိဖြစ်သွားနိုင်တာမို့ အရမ်းမောနေရင် ခဏလောက်နားပြီး သွေးနည်းနည်းအေးတဲ့အချိန်မှ ရေသောက်တာက အကောင်းဆုံးပါပဲ။
ဒါပေမဲ့ ဒီလိုတွေဖြစ်မှာကြောက်လို့ ရေလုံးဝမသောက်ဘူးဆိုရင်လည်း ကိုယ့်ရဲ့ကြွက်သားက နွမ်းနယ်လာတာမို့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေ ကျဆင်းလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ခန္ဓာကိုယ်ကလည်း လိုသလောက်ရေဓာတ်ကို မရတာကြောင့် Cool down (ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြေလျော့ခြင်း) ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကို မစွမ်းဆောင်နိုင်တော့ဘဲ နှလုံးသွေးရပ်သွားတာမျိုးအထိ ဖြစ်နိုင်တာမို့ လုံးဝမသောက်ဘဲနဲ့လည်း မနေကြပါနဲ့လို့။
Related Article >>> Gym ခဏနားတဲ့အချိန်မှာလည်း ဝိတ်အဆမတန်တက်မလာအောင် ဒီလိုအချက်တွေကို မဖြစ်မနေလိုက်နာပါ။
ဒီလောက်ရေအများကြီးသောက်နေရတော့ ဘယ်လိုမှတ်မိမှာလဲလို့ အထွန့်တက်တဲ့ အချစ်လေးတွေအတွက်လည်း နှင်းအခုလုပ်နေတဲ့နည်းလမ်းလေးကို ဝေမျှပေးပါ့မယ်လို့။ ပထမဦးဆုံး ကိုယ်တစ်နေ့ကို ရေဘယ်လောက်ပမာဏသောက်မလဲဆိုပြီး အရင်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် မနက်တစ်ပိုင်း ညတစ်ပိုင်းခွဲပြီး မနက်တစ်ပိုင်းဆိုရင်တော့ ဘယ်လောက်သောက်မယ်၊ ညပိုင်းဆိုရင်တော့ ဘယ်လောက်သောက်မယ်ဆိုပြီး တစ်ခါတည်းခွဲထားလိုက်ပေါ့။
ဥပမာ- နှင်းကတစ်နေ့ကို ရေ ၂ လီတာခွဲသောက်တယ်။ မနက်မိုးလင်း နိုးနိုးချင်းဆိုတစ်ခွက် ရုံးမှာဆိုရင် တစ်လီတာခွဲ၊ ညနေ Gym ဆော့တဲ့အချိန်ကနေ ညအိပ်တဲ့အထိဆိုရင်တော့ တစ်လီတာ စသည်ဖြင့်ခွဲထားလိုက်တာပေါ့။ ဒါဆိုရင် သောက်ပြီးလား မသောက်ပြီးလားစဉ်းစားရင်း တိုင်ပတ်နေစရာမလိုတော့ဘူးလေ။ နှင်းထင်သလောက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင် ယောင်းတို့လည်း ၂ လီတာခွဲလောက်တော့ သွားမယ်ထင်တာပဲ။ ဒီနည်းလေးက လွယ်ကူပြီး အဆင်ပြေမယ်လို့လည်း မျှော်လင့်ပါတယ်နော်။ Gym တွေဆော့နေကြပြီလား။ အခြေအနေဘယ်လိုရှိကုန်ပြီလဲ ပြောခဲ့ကြပါဦး။
References : lifehacker, livestrong
အခုပဲရဗေူးပွေးကိုငျနပွေီမလား မညာခငျြစမျးပါနဲ့ ခြိမရယျ
ရအေသကျတဈမနကျတဲ့။ လူတဈယောကျရဲ့ခန်ဓာကိုယျကို ရဓောတျ ၇၀% နဲ့ဖှဲ့စညျးထားတာမို့ အသကျရှငျရပျတညျဖို့အတှကျ အရမျးအရေးကွီးတယျလို့ပွောရငျလညျး မမှားပါဘူးနျော။ အထူးသဖွငျ့ ပုံမှနျသှားလာလှုပျရှားရုံတငျမကဘဲ လကေ့ငျြ့ခနျးပါထပျလုပျတဲ့ အခဈြလေးတှဆေိုရငျ တခွားလူတှထေကျ ရဓောတျဆိုတာပိုပွီးလိုအပျတာပေါ့။ ဒါပမေဲ့လညျး တခြို့က ရသေောကျတာမကောငျးဘူးပွောကွပွနျတော့ ရကေသောကျရမလိုလို လကျထဲကဘူးကိုပွနျပဲခထြားရမလိုလိုနဲ့ ဇဝဇေဝါတှထေပျဖွဈရပွနျရော။ မသောကျပွနျရငျလညျး လူကပငျပနျးပွီးထပျနုနျးသှားမှာဆိုတော့ ကွံရာမရဖွဈပွီး ဘာလုပျလို့လုပျရမှနျးမသိတဲ့ ယောငျးလေးတှအေတှကျ ဒီဆောငျးပါးလေးကို ရေးဖွဈသှားတာပါ။ ကဲ ဒီတော့ ဆကျကွညျ့လိုကျရအောငျ ….
ယဘေုယအြားဖွငျ့ပွောရရငျ လူတဈယောကျကနစေ့ဉျသှားလာလှုပျရှားဖို့အတှကျ ရေ ၈ ခှကျအနညျးဆုံးဝငျအောငျ သောကျပေးရပါမယျတဲ့။ ဒါပမေဲ့ ဒီ Routine ထကျပိုပွီး လကေ့ငျြ့ခနျးပါထပျလုပျတဲ့ယောငျးလေးတှကေတော့ လကေ့ငျြ့ခနျးမလုပျခငျ၊ လုပျနစေဉျအတှငျးနဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျအပွီး စသညျဖွငျ့ ၃ ပိုငျးထပျခှဲပွီး ရထေပျသောကျပေးရပါမယျ။ BMI၊ ဝိတျ၊ အရပျ၊ လိငျ စတာတှအေပျေါမူတညျပွီး တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ သောကျရမယျ့ပမာဏခငျြးမတူပမေဲ့ နှငျးကတော့ စံသတျမှတျထားတဲ့ အတိုငျးအတာကိုပဲ ပွောလိုကျတော့မယျနျော။
Related Article >>> ခန်ဓာကိုယျမှာရှိတဲ့ အဆီရာခိုငျနှုနျးကို လိုကျပွီး ပုံစံက ဘယျလိုပွောငျးလဲသှားလဲ?
လကေ့ငျြ့ခနျးမဆော့ခငျ ၂ နာရီ၊ ၃ နာရီအလိုမှာတော့ ရေ ၁၇ အောငျစကနေ ၂၀ အောငျစအထိ သောကျပေးရပါမယျ။ သှေးပူလကေ့ငျြ့ခနျးလုပျတဲ့အခြိနျမှာတော့ ၈ အောငျစသောကျပေးရမှာဖွဈပွီး လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျနတေဲ့ အတောအတှငျးမှာတော့ ၁၀ မိနဈခွားတဈခါလောကျ ၇ အောငျစကနေ ၁၀ အောငျစအထိ သောကျပေးရမှာဖွဈပါတယျ။ လကေ့ငျြ့ခနျးဆော့ပွီး မိနဈ ၃၀ ကနေ ၁ နာရီအတှငျးမှာတော့ နောကျထပျ ၈ အောငျစကိုသောကျပေးရမှာဖွဈပါတယျ။ နှငျးလီတာနဲ့တှကျကွညျ့တာတော့ ၁ လီတာကြျောနတေယျ။ ဆိုတော့ ခါတိုငျးရေ ၈ ခှကျအပွငျ ရတေဈလီတာတဈဗူး အပိုဆောငျးသောကျရမယျဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ။
အဓိကသတိထားရမှာကတော့ ကိုယျကအရမျးမောပွီး နှလုံးခုနျနှုနျးမတရားမွနျနတေဲ့အခြိနျမှာ ရမေသောကျဖို့ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီအခြိနျမှာ ဦးနှောကျအပါအဝငျ တခွားခန်ဓာကိုယျအတှငျးပိုငျးမှာရှိတဲ့ အစိတျအပိုငျးတှကေ (ဥပမာ နှလုံး) လုပျဆောငျမှုအပွငျးထနျဆုံးအခြိနျကို ရောကျနတောမို့ ကိုယျကမောကွီးပနျးကွီးနဲ့ ရတှေအေမြားကွီးသောကျလိုကျတဲ့အခြိနျမှာ အသကျဆုံးရှုံးတဲ့အထိဖွဈသှားနိုငျတာမို့ အရမျးမောနရေငျ ခဏလောကျနားပွီး သှေးနညျးနညျးအေးတဲ့အခြိနျမှ ရသေောကျတာက အကောငျးဆုံးပါပဲ။
ဒါပမေဲ့ ဒီလိုတှဖွေဈမှာကွောကျလို့ ရလေုံးဝမသောကျဘူးဆိုရငျလညျး ကိုယျ့ရဲ့ကွှကျသားက နှမျးနယျလာတာမို့ စှမျးဆောငျရညျတှေ ကဆြငျးလာနိုငျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ခန်ဓာကိုယျကလညျး လိုသလောကျရဓောတျကို မရတာကွောငျ့ Cool down (ခန်ဓာကိုယျကိုဖွလြေော့ခွငျး) ဆိုတဲ့လုပျငနျးစဉျကို မစှမျးဆောငျနိုငျတော့ဘဲ နှလုံးသှေးရပျသှားတာမြိုးအထိ ဖွဈနိုငျတာမို့ လုံးဝမသောကျဘဲနဲ့လညျး မနကွေပါနဲ့လို့။
Related Article >>> Gym ခဏနားတဲ့အခြိနျမှာလညျး ဝိတျအဆမတနျတကျမလာအောငျ ဒီလိုအခကျြတှကေို မဖွဈမနလေိုကျနာပါ။
ဒီလောကျရအေမြားကွီးသောကျနရေတော့ ဘယျလိုမှတျမိမှာလဲလို့ အထှနျ့တကျတဲ့ အခဈြလေးတှအေတှကျလညျး နှငျးအခုလုပျနတေဲ့နညျးလမျးလေးကို ဝမြှေပေးပါ့မယျလို့။ ပထမဦးဆုံး ကိုယျတဈနကေို့ ရဘေယျလောကျပမာဏသောကျမလဲဆိုပွီး အရငျဆုံးဖွတျလိုကျပါ။ ပွီးရငျ မနကျတဈပိုငျး ညတဈပိုငျးခှဲပွီး မနကျတဈပိုငျးဆိုရငျတော့ ဘယျလောကျသောကျမယျ၊ ညပိုငျးဆိုရငျတော့ ဘယျလောကျသောကျမယျဆိုပွီး တဈခါတညျးခှဲထားလိုကျပေါ့။
ဥပမာ- နှငျးကတဈနကေို့ ရေ ၂ လီတာခှဲသောကျတယျ။ မနကျမိုးလငျး နိုးနိုးခငျြးဆိုတဈခှကျ ရုံးမှာဆိုရငျ တဈလီတာခှဲ၊ ညနေ Gym ဆော့တဲ့အခြိနျကနေ ညအိပျတဲ့အထိဆိုရငျတော့ တဈလီတာ စသညျဖွငျ့ခှဲထားလိုကျတာပေါ့။ ဒါဆိုရငျ သောကျပွီးလား မသောကျပွီးလားစဉျးစားရငျး တိုငျပတျနစေရာမလိုတော့ဘူးလေ။ နှငျးထငျသလောကျကိုပွောရမယျဆိုရငျ ယောငျးတို့လညျး ၂ လီတာခှဲလောကျတော့ သှားမယျထငျတာပဲ။ ဒီနညျးလေးက လှယျကူပွီး အဆငျပွမေယျလို့လညျး မြှျောလငျ့ပါတယျနျော။ Gym တှဆေော့နကွေပွီလား။ အခွအေနဘေယျလိုရှိကုနျပွီလဲ ပွောခဲ့ကွပါဦး။
Tags: Drink, exercise, gym, Hour, Morning, Water
Hnin Ei Oo April 4, 2019
ဆုံးဖြတ်ချက် ကောင်းတစ်ခုကို ခိုင်ခိုင်မာမာချတတ်စေဖို့ အဓိက လျှို့ဝှက်ချက်(၄)ခု